Uqobo lwakhe, uRobert A. Heinin wabhala ezininzi zeendaba zezesayensi-eziyimfundiso ebalulekileyo, inkolo kunye nefuthe leenkolelo kwimeko kaRhulumente kunye nenkcubeko. Njengomgaqo jikelele, awukwazi ukucinga nje ukuba amagama okanye iingcamango eziboniswa ngumlingisi kwincwadi zibonisa ngokucacileyo ezo zombhali. Nangona kunjalo, unikezelo oluqhelekileyo lwe-Heinlein kwiinkonzo zenkcubeko kunye nokungaqondakali kwakhe, kukhuselekile ukutsho ukuba uninzi xa kungenabo bonke ababhaliweyo abachazwe ngabalinganiswa bakhe.
Ngokuqinisekileyo kuyafana nenyaniso yezinto ezinzulu ezifunyanwe kwiincwadi zakhe. Nangona iimbono zakhe zezopolitiko nezentlalo zatshintshana ngokuhamba kwexesha, enye into eyayingqinelana ngayo yayinguHeinlein yayingu-iconoclast, ebiza ingqalelo kwimibandela yoluntu malunga nento yonke: isondo, isini, umtshato, ezopolitiko, inkolo yobuhlanga, njl njl.
UThixo unamandla onke , unolwazi , kwaye akanakunqwenela - kuthiwa kunjalo apha kule ilebula. Ukuba unengqondo ekwazi ukukholelwa zonke ezi zintathu zeempawu ezixeshanye, ndinezinto ezilungileyo kuwe. Akukho cheki, nceda. Imali kunye neentlawulo ezincinci.
[URobert Heinlein, "Iincwadi zeLazaro Ede," ukusuka kwixesha elaneleyo loLuthando (1973).]
Amadoda amancinane (ukuba ngaba) akwazi ukuphupha phezulu kunabo. Uninzi lwaThixo lunemilinganiselo kunye nokuziphatha komntwana ophangiweyo.
Iyona ngcamango ephezulu kakhulu yokuba uH.
U-Sapiens owake waphupha ukuba iNkosi uThixo Yendalo, uShaper noMlawuli weeYunivesithi, ifuna ukukhutshwa kwe-saccharine yezidalwa zaKhe, inokutshutshiswa yimithandazo yayo, ibe iyancipha xa engayitholi le nkcazo. Nangona kunjalo le ngcamango engenangqiqo, ngaphandle kokubakho ubungqina bokuyiqinisa, ihlawula zonke iindleko zenkampani enkulu kunazo zonke, ezona zinkulu, kunye neyona nto inobuninzi kwimbali.
Kukho ibali elidala, elidala malunga nomfundisi wezenkolo owacelwa ukuba axolelane noMfundiso wobubele bukaThixo kunye nemfundiso yokugwetywa kwabantwana. Wachaza ukuba, 'uSomandla, ufumanisa ukuba kuyimfuneko ukwenza izinto kwisimo sakhe esisemthethweni nasesidlangalaleni esiphezulu.
[URobert A. Heinlein, abantwana bakaMethusela. ]
"UThixo uzahlula kwiindawo ezininzi ukuze abe nabahlobo." Oku kungenakwenyaniso, kodwa kuyavakala okulungileyo, kwaye akukho mnye kunamanye ama-theology.
Into enhle malunga nokuthiwa unkulunkulu njengegunya kukuba unako ukubonisa nantoni na oyikhethile ukubonisa.
[URobert A. Heinlein, ukusuka ku- Oku Kuqhubeka. ]
Musa ukubhenela inceba kuThixo uYise phezulu esibhakabhakeni, ndoda encinane, kuba engekho ekhaya kwaye ayizange ihlale ekhaya, kwaye ayinakukhathalela. Oko uyenzayo ngokwakho, nokuba uvuyayo okanye ungonwabi-phila okanye ufe-yinto yakho yequmrhu eliqinileyo kwaye akukho nto ibakhathalele. Enyanisweni unokuba yindalo yonke kunye nesizathu esisodwa seengxaki zakho. Kodwa, ekugqibeleni, uninzi unokuyithemba ukuba udibaniso kunye namaqabane angabikho ophezulu (okanye nje ngoThixo) njengokuba ukhona.
Ngoko keyeka ukutshitshisa kwaye ubhekane nayo - 'Wena unguThixo!'
[Robert A. Heinlein Oktobha 21, 1960.]
Andizange ndiqonde indlela uThixo angalindela ngayo izidalwa Zakhe ukuba zikhethe unqulo olulodwa lwenyaniso ngokholo - lundibetha njengendlela ekhohlakeleyo yokusingqongileyo.
[URobert Heinlein, uJubal Harshaw eSiganger kwiLizwe elinqabileyo , (1961) . ]
Iingcaphuno ngeNkolo kunye neTheoloji
Imbali ayibhalanga naphina naluphi na ixesha inkolo inokholo. Inkolo yintonga yabantu abangakhange banamandla ngokwaneleyo ukuma kwiindawo ezingaziwa ngaphandle koncediso. Kodwa, njengentambo, abaninzi abantu banenkolo kwaye bachitha ixesha kunye nemali kuyo kwaye babonakala befumana injabulo enkulu ekuhambeni kwayo.
Kuzo zonke iintlanga ezingaqhelekanga ukuba uluntu luye lwasusa umthetho ngaphandle kwezinto, ukunyeliswa yinto engummangaliso kakhulu - ngokunyaniseka kunye nokuchasana okungafanelekanga ukulwa nesibini nendawo yesithathu.
Isono silele kuphela ekubuhlungu abanye abantu ngokungadingekile. Zonke ezinye izono zenziwe zingenangqondo. (Ukuzilimaza akusiyo isono - nje sisisidenge.)
Imfundiso yendoda enye yindoda yesinye isisu sokuhleka.
[URobert Heinlein, "Iincwadi zeLazaro Ede," ukusuka kwixesha elaneleyo loLuthando (1973). Ngamanye amaxesha uphazamiseka ngokuthi "inkolo yendoda enye yindoda yesinye isisu."]
Ukuba uthandaza ngokukhawuleza, unokwenza amanzi aphume kwinqanaba. Kunzima kangakanani? Kutheni, kunzima ukwenza amanzi aphephe emkhatsini, kunjalo!
[URobert A. Heinlein, i- Expanded Universe. ]
Isihogo andiyi kuthetha ngale ndlela! UPetros, ukuphakade apha ngaphandle kwakhe akusikho ngonaphakade; kukuphakade kwintlungu kunye nosizi kunye nentlungu. Ucinga ukuba le halo edibeneyo ithetha nantoni na xa ndiyazi - ewe, undiqinisekisile! - ukuba intanda yam iyatshisa e-Pit? Andizange ndicele kakhulu. Ukuvunyelwa ukuba uhlale naye. Ndikulungele ukuhlamba izitya ngonaphakade ukuba ndibona ukumncoma kwakhe, ulive ilizwi lakhe, thintela isandla sakhe! Uthunyelwe kwi-technicality kwaye uyazi! I-Snobbish, iingilosi ezibi zihlala apha ngaphandle kokuba zenzele enye ihlazo ukuze zifanelwe. Kodwa uMarga, oyisithunywa sangempela ukuba umntu owake waphila, uguqulwa aze athunyelwe esihogweni ukuhlushwa ngonaphakade kwi-twist child in the rules. Unokuxelela uBawo kunye noNyana wakhe othethileyo kunye noMoya oyiNgcwele ukuba bangathatha iSixeko saKhe esingcwele kwaye basichukumise!
Ukuba uMargrethe kufuneka abe seHoleni, yilapho ndifuna ukuba khona!
[URobert Heinlein, uAlexander Hergensheimer kuYobhi: Ulwahlulo loBulungisa, (1984) . ]
Ifundiso yeNkolo ayisoze yanceda; liphangela kwi-cellar emnyama phakathi kobusuku kwintaka emnyama engekho.
[URobert A. Heinlein, UYOBO: Ulwahlulo lobulungisa, (1984) . ]
Nabani na onokukhonza unqulo lwesithathu kunye nokugxininisa ukuba unqulo lwakhe luyiyo yonke into inokukholwa nantoni ... mnike nje ixesha lokumlinganisa.
[Unqulo] Ukholo lundibetha njengobuvila buyingqondo.
[URobert Heinlein, uJubal Hershaw, kwi- Stranger kwiLizwe elinqabileyo , (1961).]
Xa kukho nawuphi na urhulumente, okanye nayiphi na icawa yeso sizathu, uzimisele ukuthetha kwizifundo zawo, 'Oku akunakukufunda, oku kungenakukubona, oku kungavumelekile ukuba wazi,' umphumo wokugqibela unobundlobongela noxinzelelo, kungakhathaliseki ukuba ezingcwele iinjongo. Inamandla encinci yamandla iyadingeka ukulawula umntu onengqondo yakhe; ngenye indlela, akukho mandla angakwazi ukulawula umntu okhululekileyo, umntu onengqondo ekhululekile. Hayi, kungekhona i-rack, kungeyiyo i-fission bomb, ayikho nto - awukwazi ukunqoba umntu okhululekileyo; Into enokwenzayo ukumbulala.
[URobert Heinlein, Ukuba Oku Kuqhubeka , (1940).]
Imiyalelo Elishumi yilezi ziqhwala. Iintlanu zokuqala zenzelwe kuphela kubabingeleli kunye namandla; Okwesibini ezintlanu iinqununu zinyaniso, azigqibekanga okanye zanele.
[URobert Heinlein, u-Ira Johnson kwi- Sail Beyond Sunset. ]
IBhayibhile yinto eqokelelweyo yeempawu eziphikisanayo nabani na onokubonisa nantoni na kuyo.
[URobert Heinlein, uDkt. Jacob Burroughs kwiNombolo yeSilwanyana. ]
Kuyinto enqwenela ukuba phantse nayiphi na ihlelo, inkolo, okanye inkolo iya kubeka umgaqo-mthethweni kumthetho xa ifumana amandla ezopolitiko ukwenza njalo, kwaye iya kulandela ngokuphelisa inkcaso, ichithe yonke imfundo ukuba ithathe kwangaphambili iingqondo zabaselula, kwaye ngokubulala, ukuvalela, okanye ukuqhubela ngaphantsi komhlaba bonke abaphikisayo.
[URobert A. Heinlein, i- Postscript kwi-Revolt ngo-2100. ]
Inkolo ngenye indlela iyinomthombo wolonwabo, kwaye andiyi kubuya nabani na ulonwabo. Kodwa yintuthuzelo efanelekileyo kubuthathaka, kungekhona yomeleleyo. Inkathazo enkulu nenkolo - nayiphi na inkolo - yinto inkolo, esamkele iziphakamiso ezithile ngokholo, ayikwazi ukugweba ezo ziphakamiso ngobungqina. Omnye unokusekela umlilo ofudumele wokholo okanye ukhethe ukuhlala ngokuqinisekileyo okucacileyo-kodwa umntu akanako ukuba bobabini.
[URobert A. Heinlein, ukususela "ngoLwesihlanu".]
Ukholo endinyuselwa ngalo luqinisekisiwe ukuba ndingu-bhetele kunabanye abantu; Ndasindiswa, bahlanjululwa ... Iimvumi zethu zazilayishwa ngokuzikhukhumeza-ukuzibongela ngendlela esilungileyo ngayo kunye noSomandla kwaye yintoni umbono ophezulu ayenayo kuthi, yintoni isihogo wonke umntu oya kubamba oza kwiSuku loMgwebo.
[URobert A. Heinlein, ovela kuLaurence J. Peter, Iingcaphulo zikaPetros: Iingcamango Ngexesha Lethu, noJames A. Haught, u-., Iminyaka engama-2000 yokungakholwa, abantu abaziwayo benesibindi sokungaqiniseki. ]
Ii-Whores zenza umsebenzi ofanayo nababingeleli, kodwa ngokugqithiseleyo.
[URobert Heinlein, ixesha elaneleyo lothando (1973).]
Uqeqesho lwe-shaman lunamathuba amaninzi. Inika isimo esiphakeme kunye nokuphila okukhuselekileyo ngaphandle komsebenzi kwi-dreary, sweaty sense. Kwiinkoliso ezininzi zinikela ngamalungelo omthetho kunye nokuzikhusela okungabanikiweyo kwamanye amadoda. Kodwa kunzima ukubona indlela umntu owanikwe igunya esuka phezulu kwiindaba eziphakamileyo zolwazi kubo bonke uluntu unomdla wokuthatha iqokelela ukuhlawula umvuzo wakhe; kubangela umntu ukuba akrokre ukuba i-shaman iphezulu kumgangatho wokuziphatha kwanoma yimuphi umnye umntu. Kodwa ngumsebenzi othandekayo ukuba unako isisu.
Kodwa ndiphikisana ukuba ukuziphatha okunonkcenkceshelo lwabaninzi 'babo abangcwele' basichukumisa naluphi na uxanduva lokuqonda ukuthatha izinto ngokubalulekileyo. Akukho mali yokulinganiswa okuzingcwalisayo kunokuyenza into enjalo ngaphandle kokugula.
[URobert Heinlein, iTamp Royalle. ]
Uluhlu lweMetals Basic
AmaJamani kwiMfazwe yeMelika yaseMelika
Yintoni iPump iphakamisa?
Fumana Iingcamango Zeengqungquthela Kwiimvavanyo kunye Neemizekelo
Iingcaphuno malunga neD-Day